Southeast Asia | Dr Ko Ko Gyi's Blog
ပြည်သူ့လစာစားပြီး မေးရင်ဘာမှမသိတဲ့ သမ္မတရုံးက တာဝန်ခံဆိုသူ ဦးဇော်ဌေး (မှူးဇော်)
ပြည်သူ့လစာစားပြီး မေးရင်ဘာမှမသိတဲ့ ဘုမသိဘမသိ သမ္မတရုံးက တာဝန်ခံဆိုသူ ဦးဇော်ဌေး (မှူးဇော်)
Actually he knows every thing but lying asapropaganda. Just look how he had successfully turned all the Myanmar people over to become ULTRA-NATIONALISTS by purposely giving the false news in the FIRST scenario.
Tags:Asia, Burma, China, Japan, Myanmar, Rohingya people, Southeast Asia, Thein Sein
Please read my article in Burma Digest @ What’s up China?
Tags:Burma, Burmese Communist, Burmese language, China, India, Myanmar, National Registration Card, Southeast Asia
အရှင်ရာဟုလာ (မစိုးရိမ်):”ဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေတာတွေကို သတိမူကြပါ။”
“လူတစ်ယောက်အနေနှင့် မိမိတစ်စုတစ်ဖွဲ့၏ အတွေးအခေါ်အယူအဆကို လေးစားကြည်ညိုယုံမျှနှင့် မပြီး။ အခြားတစ်ပါးသောသူများ၏ အတွေးအခေါ်အယူဆများကိုလည်း ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံမှု မရှိပဲ ဝေဖန်နှိပ်နှယ်ခြင်း မပြုသင့်” ။ (အသောကကျောက်စာ) ။
Tags:Asia, Bama, Burma, Myanmar, Southeast Asia
Tags:April, Gudi Padwa, New Year, Pohela Boishakh, Puthandu, Southeast Asia, Tamil Nadu, Vishuva Sankranti
Bo Khin Nyunt ကျားသေ နဲ့ မီဒီယာ
Source: ကျားသေ နဲ့ မီဒီယာ by Zarny Win from Irrawaddy blog
သင်းကွဲတွေကို လူရာသွင်း။ ကျားသေကို အသက်သွင်းချင်နေကြသော ဂျာနယ်များ။” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ Chawchaw Mirror ရေးသားထားတာကို ကူးယူ ဖော်ပြပါတယ်။
Tags:Burma, Kokang, Muslim, Southeast Asia
Tags:Asia, Bama, Burma, Kokang, Myanmar, Ne Win, Southeast Asia, Yoma Bank
Yunnan’s Gateway Project was started in December 2009 asadirect response to remarks that President Hu Jintao made duringavisit to Yunnan in July of that year.
Tags:Asean, ASEAN Free Trade Area, Asia, China, Qin Guangrong, South Asia, Southeast Asia, Yunnan